नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटारमा जारी, नेताहरु वीच चर्का चर्की | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
नेकपा सचिवालय बैठक बालुवाटारमा जारी, नेताहरु वीच चर्का चर्की
प्रकाशित मिति ६ फाल्गुन २०७५, सोमबार ११:१९ लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । पार्टी एकतालाई छिटो टुंगो लगाउने प्रयासमा नेकपा सचिवालयको बैठक बसीरहेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी बैठक तल्ला तह र भ्रातृ संगठनहरुको एकता टुंगो लगाउने विषयमा केन्द्रित रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
एकताका लागि गृहमन्त्री समेत रहेका नेता रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भए पनि अझैसम्म एकताले पूर्णता पाएको छैन । त्यसैले अब अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैंले एकताको खाका तयार पार्ने जिम्मा लिने तयारीमा छन् ।
थापा संयोजकत्वको कार्यदलमा ऊर्जामन्त्री समेत रहेका वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीसमेत रहेका रघुवीर महासेठ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सदस्य थिए । खासगरी नेताहरुलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिने कि नदिने भन्नेमा विवाद छ । यसअघि पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको पद त्याग्ने तर पार्टीको जिम्मेवारी नत्याग्ने भनेपछि नेकपामा एकता प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको छ ।
विश्वकप छनोटमा नेपालको लगातार तेस्रो हार, सुपर–६ मा पुग्ने सम्भावना लगभग समाप्त
काठमाडौं । आइसिसी विश्वकप छनोट प्रतियोगितामा नेपाल लगातार तेस्रो खेलमा पराजित भएको छ। शनिबार जिम्बावेको बुलावायो एथलेटिक मैदानमा समूह…
मेष – यात्राको सुख मिल्नेछ । पारिवारिक भेटघाटमा रमाइलो हुनेछ । साताको मध्यमा कार्यमा बाधा, स्वास्थ्यमा बाधा एवम मानसिक…
३३ किलो सुनकाण्डमा शालिमार ज्वेलर्सका सञ्चालक समातिए, प्रहरीकाे कडा अनुसन्धान !
काठमाडौं । सुन तस्करी घटनामा फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
काठमाडाैँ । हिन्दू धर्मावलम्बीले प्रत्येक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि श्रद्धापूर्वक वाचन र श्रवण गर्दै आएको श्रीस्वस्थानी व्रत आज समापन…
अपर तामाकोशीको साधारण शेयर निष्काशन, कहाँबाट आवेदन दिने ? कसले पाउँछ आवेदन दिन ?
काठमाडौं । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडले सर्वसाधरणहरुको साधारणआजदेखि निष्काशन भएको छ ।
सर्वसाधारणका लागि कम्पनीले १ करोड ५८ लाख ८५…
वर्षा र जुलुसले ट्राफिक जाम अत्याधिक
काठमाडौँ । वर्षा र सडकमा भइरहने नाराजुलुसका कारण काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक जाम अत्याधिक हुने गरेको छ ।
उपत्यकामा धेरै सवारीसाधन,…
वीरगञ्ज यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अख्तियारको छापा6views